उपचार खर्चको पर्खाइमा चेपाङ बालक | चितवन पोष्ट दैनिक
उपचार खर्चको पर्खाइमा चेपाङ बालक
२०७० माघ १४, मंगलवार ०३:१२ गते
नारायणगढ । निःशुल्क आवासीय सुविधासहित दस कक्षासम्म पढ्न एक वर्षअघि मकवानपुरको विकट गाउँ कालिकाटार–९ धुसराङबाट चितवन आएका प्रदीप चेपाङ रत्ननगर–३, बेल्सीस्थित नवोदय स्कुलमा भर्ना भए । प्रदीपले मिसन स्कुलमा निःशुल्क पढ्न थालेकोमा विपन्नताको बोझ चेपाङ परिवारमा अलिकति हलुङ्गो भएको थियोे, तर चेपाङ परिवारले सन्तोषको सास फेर्दा नफेर्दै फुटबल खेल्ने क्रममा जेलिएर स्कुल प्राङ्गढमै प्रदीपको खुट्टा भाँचियो ।
१४ वर्षीय बालक प्रदीपलाई गत पुस २६ गते उपचारार्थ भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा ल्याइयो । वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले उनको खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिए, तर विद्यालय प्रशासनले खर्च गर्न चाहेन । प्रदीपका काका विष्णुराज चेपाङका अनुसार उनको सामान्य प्लाष्टर गरेर झारा टार्ने प्रयास गरियो । उनका अनुसार प्रदीपको उपचार खर्च करिब ५० हजार लाग्ने बताइएको थियो । नवोदय स्कुलको चाहनाबमोजिम डा. पौडेलले सामान्य प्लाष्टर गरेर ‘अब्जरभेसन’ मा पठाइदिए ।
प्रदीपलाई फ्लोअपमा दुई सातापछि रत्ननगरको साईराम अस्पताल आउन भनियो । गत शनिबार प्रदीपका परिवारसहित अस्पताल आए । प्रदीपको दाहिने खुट्टाको एक्सरे हेर्दा बीसको उन्नाइस पनि भएको थिएन । डा. पौडेलले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका थिए । अस्पतालमा विष्णुलालले एक्सरे रिपोर्ट देखाउँदै मिसन स्कुलका विदेशी स्वयंसेवकलाई भन्दै थिए– ‘डाक्टरले एकहप्तापछि बोलाएका छन् । त्यसबेलासम्म पनि जोर्नी लागेन भने अप्रेसन गर्नुपर्छ ।’
उपचार खर्च अभावका कारण अर्को साता बोलाइएको थियो । प्रदीपकी आमा सरिता चेपाङ स्तब्ध भएकी थिइन् । उनले आँखा रसिलो पार्दै भनिन– ‘हामी चेपाङ परिवारसँग अप्रेसन गर्ने खर्च छैन । गाउँमा पैसा कहाँ माग्ने, कोसँग माग्ने हामीलाई केही थाहा छैन ।’ छोरालाई पढाउन नसकेर पठाएको यस्तो दुःख आइप¥यो भनेर उनले बिलौना गरिरहकी थिइन् ।
निराश भएर फर्किन लाग्दा प्रदीपको उपचार हुन्छ चिन्ता नगर्नोस् भनेपछि चेपाङ परिवारलाई केही राहत मिलेको थियो । बेलुका घर नफर्कँदै ह्दयविदारक आवाजमा उनै प्रदीपले फोनमा भने, ‘सर म चेपाङको छोरा हूँ । चेपाङ जाति असाध्यै गरिब छ, त्यो तपाईंलाई थाहै छ । पैसा नभएर ठूलो स्कूलमा निःशुल्क पढ्न आएको थिएँ दसा लाग्यो । मेरो उपचार चाँडै गराइदिनुहोस् ।’
उपचार गरिबको पहुँचभन्दा टाढा रहेको उदाहरण त प्रदीपको घटनालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि पर्याप्त हुन्छ । उनको परिवार उपचार गर्न सक्ने अवस्थाको भएको भए प्लाष्टर झुण्ड्याएर यसरी याचना गर्नुपर्ने थिएन । चितवनमा कतिपय संस्थाहरु परोपकार कर्ममा जुटिरहेका छन् । विकट क्षेत्रका यी बालक आफ्नो खुट्टाको उपचारका लागि याचना गरिरहेका छन् ।
मंगलबारदेखि प्रदीपलाई भरतपुर अस्पतालको हाडजोर्नी विभागमा भर्ना गरिएको छ । चिकित्सकहरुले उनको शल्यक्रिया बुधबारभित्र गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मंगलबार बेलुकी विष्णुलालसँग सम्पर्क राख्दा उनी सामान्य खर्चका लागि गाउँमा सापटी खोज्न जाँदै गरेको बताएका थिए ।
मनहरिबाट उनको गाउँ धुसराङ पुग्न चार घण्टा उकालो बाटो हिँड्नुपर्छ । उनका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा सरकारी सुविधामा प्रदीपको खुट्टाको शल्यक्रिया गराउन औषधिसहित २५ हजार रूपैयाँ लाग्ने डाक्टरले सुझाव दिएका छन् । नवोदयका शिक्षक तुलबहादुर सुनुवारले चेपाङ समुदायका लागि निःशुल्क उपचारको लागि प्रयास भइरहेकोे बताए ।